Uthi ngeke aphinde aguqe uZaha ngoba akusizi ngalutho - Impempe
Uthi ngeke aphinde aguqe uZaha ngoba akusizi ngalutho
UWilfreid Zaha weCrystal Palace
“Ngikhathele ukuguqela into engekho uma kuzoqala imidlalo ngoba esikhundleni sokuqwashisa ngokucwaswa kwabebala elimnyama ngibona lesi senzo siwukuzehlisa isithunzi”
UWilfreid Zaha weCrystal Palace edlala kwi-English Premiership uyena obekhuluma lapha kwiFinancial Times, Business of Football Summit.
UZaha ochayise i-England eminyakeni edlule waqoma ukudlalela i-Ivory Coast ukholwa ukuthi ukuguqa ngedolo ngaphambi kokuqala kwemidlalo kunokubehlisa isithunzi bengabadlali bebala elimnyama.
Ngokwakhe ngabe yima besukuma khona abadlali bebala elimnyama baqahamuke nezindlela zokulwa nalokhu kungcola hhayi indaba yokuguqa ngedolo.
Kusukela kuqale imidlalo ngemuva kokudamba kweCovid-19, wonke amaqembu ase-England ahlaba ngedolo phansi uma kuzoqala umdlalo okuyindlela le ligi ekhombisa ngayo ukuthi ayihambisani nokucwasa ngokwebala okudlange kakhulu kodwa kwabamnyama.
Kuningi okunye okuzanywa ile ligi yase-England njengoba ngasekuqaleni kwayo wonke amaqembu ebephoqwe ukubhala umyalezo othi: Black Lives Matter esikhundleni segama kumbe isibongo somdlali.
“Ngikhule ngifundiswa ukuthi kumele ngizigqaje ngokuba wumuntu omnyama manje ukuguqa ngedolo ukuze ngikhombise umyalezo akuyona indlela engiyijwayele,” usho kanje uZaha.
“Inokusehlisa le nto yokuguqa ngedolo singabebala elimnyama. Le nto yokuguqa ngedolo ayithi shu ngoba kwesinye isikhathi abanye bayakhohlwa ukuthi konke kufanele kwenzeke. Yinto eyenziwayo nje ngoba kufanele.
“Ngiyahluleka ngempela ukuthola ukuthi yini esizoyizuza ngalokhu kuguqa ngaphambi kwemidlalo. Ngeke ngisaguqa manje, ngikhathele. Ngeke ngisagqoka lutho olunemibhalo ekhuza lo mkhuba wokucwasa ngokwebala ngoba akukho engikuzuzayo ngaphandle kokuba semehlweni (njengomunye wabalwa nokucwaswa ngokwebala),” kusho yena.
Esesonga uthe: “Sizikhipha thina inyumbazane kodwa futhi ithina esithi sifuna kucace ukuthi abantu bayafana futhi bayalingana.
“Inkinga ngayo yonke le mizamo akwenzeki lutho. Ngimi lapho ngale ndaba futhi akukho okunye engiyophinde ngifise ukukulalela ngaphandle kwezenzo ezibonakalayo.
Previous Previous post: Ukubekezela kukaMntambo sekuqalile ukuthela izithelo ezinhle
Next Next post: Abalandeli beChiefs sebenqena ngisho ukuya emsebenzini ngenxa yamahloni adalwa yithi – Willard Katsande